Coveralls → Kushanda mbatya • nyanzvi P & M makomboni emakomputa
Hovhorosi Ivo anoshandiswa mumaindasitiri mazhinji, kusiyana kwavo kunoita kuti vakodzere nzvimbo dzakasiyana siyana, zvese panoraswa uye seti yepurasitiki inokurudzirwa.
Iyo sutu inogona kushandiswa mukuchinjana kwe Sweatshirts i bhurugwa. Kutenda kwazviri, unogona kuchengetedza muviri wese wepasi uye zvipfeko zvakavanzika pazvinhu zvinokuvadza uye tsvina.
Kuti zvive nyore uye zvinyaradze, vagadziri vazhinji vanoshandisa mimwe mhinduro, senge zvinhu zvinotsigira sutu iri mumaoko, ichidzivirira kuti isatsvedze.
Tinokupa iwe mukupa kwedu insulated hovhorosi, pamwe neshanduro dzakaonda zhizha uye masutu ekudzivirira.
Iyo yemhando yepamusoro yezvinhu inovimbisa mukureba kwenguva refu kwemasutu, asi zvakare yakakwana mhepo kutenderera, iyo inodzivirira yakanyanyisa kudikitira.
Chikonzero chikuru masutu ebasa kudzivirira zvipfeko kubva mukukuvara kana kusviba, nepo chinangwa chekupfeka chinodzivirira kubva kumakemikari kana moto.
Isu tiri muparidzi wemakivha anovhara 3M, Dupont, Leber & Hollman, Reis uye Resin. Mamwe maseti akawedzeredzwa nehomwe pamabvi anotendera kuiswa kwemapfumo emabvi ebasa rakareba uchipfugama. Iwo ekuvharira akagadzirwa nemaseams akasimbiswa munzvimbo dzinotetepa.
Nekuda kwekusiyana kwekushanda tembiricha, isu tinopa kushanda maofficialayo akagadzirwa nemhepo zvinhu zvinobvumidza rusununguko rwekufamba, kudzikisira kudikitira kwakanyanya panguva yebasa remuviri. Hembe dzakadai dzakakwana kubasa mumashopu emota, fitters, pombi dzemvura nevamwe - chero paine njodzi huru yekusvibiswa nezvinhu zvakaoma kusuka.
Muchikamu chemasutu ezhizha, kune mamwe mavhezheni asina guruva, anogona kupedzwa nawo masiki kana nengowani. Midziviriro inodzivirirwa inogadzirwa nemachira epamusoro-soro anovimbisa kushandiswa kwenguva refu. Zvemhando iri nani, mamwe mamodheru akasimbisa maseams ekudzivirira kubva pakubvaruka uye abrasions. Isu zvakare tine mamodheru ane sewn-in foni homwe.
Nguva yechando yebasa hovhoni ndeimwe nzira kune yechinyakare mbatya dzebasa dzine matirauzi nemvere. Kubatsira kwavo ishanduro inodzivirira kubva kune tsvina pakati pematanho ega. Kutenda nekushandiswa kwemusanganiswa wakakodzera wezvinhu, haina kunyanyisa kukora, uye izvi zvinobvumidza rusununguko rwekufamba. Hovhorosi yenguva yechando mukupa kwedu yakaitwa nekambani yeReis.
Iyo yakasungirirwa kusvetuka sutu inogadzirwa nekotoni ine kusanganisa kwepolyester, iyo zvakare inosanganisira iyo lining. Musana wakagadziridzwa nerabha yakasarudzika yekusununguka kwekufamba. Aya mamodheru anonyanya kukodzera ma welders, vavaki vemigwagwa, fitters nevashandi vekuvaka. Mahofisi ekuvharira akashongedzerwa nehomwe dzinokutendera kuti uchengete foni kana zvinhu zvidiki. Tambo dzechiuno nemaoko dzinodzivirira kukwevera kumusoro uchifamba. Mimwe mienzaniso zvakare ine homwe dzemapedhi ekuderedza kumanikidza kana uchishanda pamabvi.
Asina-yakarukwa uye ekugadzira ekuvhara
Masutu akasarudzika ekudzivirira kubva kumakambani akadai se3M kana Dupont akagadzirirwa kuchengetedza pazvinhu zvinokuvadza. Izvo zvipfeko zvinopihwa zvakakumikidzwa kune, pakati pevamwe. vapendi, vavhimi pamwe nevanhu vanobata nemakemikari akasimba. Uye zvakare, kune chengetedzo, masutu akasarudzwa anowanikwa mune yambiro mavara. Izvo zvakagadzirirwa vanhu vanoshanda munzvimbo dzeruzhinji, yakaoma mamiriro ekunze kana husiku.
Hunyanzvi masutu ekudzivirira anosangana nezvinodiwa zvinodiwa neEuropean Union pamasutu ekudzivirira. Overalls yakatsaurirwa kune yakaoma mamiriro ekushanda inodzivirira kubva kumakemikari zvinhu, zvine radioactive zvinhu, guruva uye radioactive zvikamu Zvimwe zvekushandisa zvine zipi zvinoita kuti zvive nyore kuisa pachipfeko.
Iyo yakazara yakazara yemhando inogona kutengwa zvese muchitoro chedu chepamhepo www.pm.com.pl kana muchitoro chedu paAllegro "PRODUCER-BHP".
Allegro basa hovhorosivakadzi hovhorosi yebasaone-chidimbu hovhorosihovhoni dzebasa dzevarumehovhorosi inonaya mvurakushanda maofficialbasa hovhosi AllegroAudi inoshanda hovhorosivakadzi hovhorosi yebasaGdynia hovhorosione-chidimbu hovhorosiKrakow basa hovhorosihovhoni dzebasa dzevarumeinsulated basa hovhorosiOLX basa rekuvharamugadziri hovhoniWelding masutu ebasaakashandisa hovhorosibasa hovhoni Warsawhovhorosi ine chinyorwayechando basa hovhorosiinodzivirira basa hovhonibasa rekudzivirira rinovhara crosswordzvakachipa zvekupfekajira rekuvhara mabasambatya dzebasa mbatyaakashandisa hovhorosi yebasa
5 / 5 ( 12 mavhoti )